Nyefe email na igbe mbata na-aga n'ihu na-abụ usoro na-akụda mmụọ maka azụmaahịa ziri ezi ka ndị spamm na-aga n'ihu na-emejọ ma na-emebi ụlọ ọrụ ahụ. N'ihi na ọ dị mfe ma dị ọnụ ala izipu ozi-e, ndị spammers nwere ike ịwụfu site na ọrụ gaa na ọrụ, ma ọ bụ ọbụna dee ederede nke ha si na ihe nkesa gaa na ihe nkesa. Ndị na enye ọrụ ịntanetị (ISPs) amanye iji nyochaa ndị ziri ozi, wulite aha na izipu adreesị IP na ngalaba, yana ịlele na ọkwa email ọ bụla iji gbalịa ma jide ndị omempụ.
Na agbanyeghị ma ị wuru ọrụ nke gị, dị na adreesị IP nkekọrịta, ma ọ bụ adreesị IP raara onwe ya nye… ọ dị oke mkpa iji nyochaa ntinye igbe mbata gị. Na, ọ bụrụ na ị na-akwaga na onye na-eweta ọrụ ọhụrụ yana na-eme ka adreesị IP na-ekpo ọkụ, nlekota oru di oke nkpa iji hụ na ndị debanyere aha gị na-ahụ ozi gị.
Nnwale Ndepụta Mkpụrụ - emechara ka omume kachasị mma nke ndị ọkachamara emailing jiri, InboxAware na ntinye nlebanye igbe na-enyere ndị na-ere ahịa email aka ịmata ma merie nzacha nyocha na ọnyà spam nwere ike ịkwụsị ozi ịntanetị gị tupu ị ziga.